प्रिय AT&T U-Verse | Martech Zone
प्रिय एटी एंड टी U- श्लोक
शुक्रबार, फेब्रुअरी 5, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म पहिलेदेखि नै तपाईंको एक ग्राहक हुँ। म सँग तपाईं दुवै घर फोन र DSL छ (अघिल्लो SBC)। मलाई सेवा मनपर्दछ तर DSL अपग्रेड गर्नका साथै राम्रो टिभी सेवाको फाइदा लिन चाहन्छु। तपाईले देख्नुभयो, मेरो अपार्टमेन्टले केवल आधारभूत प्याकेज प्रदान गर्दछ र म अपग्रेड गर्न चाहन्छु।
पछिल्ला दुई बर्षको लागि, तपाइँले केहि पठाउनुभयो अविश्वसनीय रूपमा मोहित प्रत्यक्ष मेल मैले अपग्रेड गर्न अनुरोध गर्दै। म तिनीहरूलाई बारेमा एक महिनामा मेरो अपार्टमेन्टमा ठीकसँग सम्बोधन गरिएको हुन्छ। एक महिना तपाईले पूर्ण रंग पुस्तक पठाउनु भयो जुन दुबै DSL र टेलिभिजनका लागि सबै प्याकेजहरू वर्णन गर्दछ। तपाईंले मलाई पाउनुभयो ... म बेचिएको छु! मैले यु-पद अपग्रेड गर्न आवश्यक पर्दछ कोल्टहरू तिनीहरूको भव्य महिमामा आइतबार जित्छन्।
यो तपाइँले मलाई देखाउनुभएको हो ... र हो, म तयार छु!
त्यसो भए म भ्रमण गर्छु AT&T.com र अपग्रेड नाउ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। दोह! पहिले मैले उपलब्धता जाँच गर्नु पर्छ। मलाई थाहा छ यो उपलब्ध छ, किनकि, # १ #२1324 मा मेरो छिमेकीसँग एक बर्ष भन्दा बढीको लागि सेवा थियो (ऊ बाहिरियो)। त्यो तेस्रो कथामा छ ... म दोस्रो कथामा छु। त्यसो भए, म मेरो ठेगाना र फोन नम्बर बुझाउँछु ...
सेवा उपलब्ध छैन।
मेरो पहिलो प्रश्न, प्रिय एटी एण्ड टी, किन तपाईं मेरो ठेगानामा गत बर्षको लागि विज्ञापनहरू पठाउनुहुन्छ किन भनेर सोधेर म तपाईंको सेवा अपग्रेड गर्दछ यदि यो वास्तवमै उपलब्ध छैन भने (जुन मलाई थाहा छ यो सत्य छैन)। डायरेक्ट मेलको यस स्थिर ब्यारेसमा तपाईंले धेरै पैसा खर्च गर्नुभयो। …
ओह राम्रो छ ... म अर्को मार्ग लिने निर्णय गर्दछु। म च्याट अनलाइनमा क्लिक गर्छु अब तपाईंको पृष्ठमा सेवा। म १ que ग्राहकहरु को लागी कतारमा छु। मलाई लाग्छ तपाईं यसलाई ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ अब। मैले विन्डोमा क्लिक गरेँ र यसको सट्टा कल गर्ने निर्णय गरें। म हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ... धन्यबाद तपाईसंग फोन नम्बरहरू छन्।
फोनले एक स्वचालित आवाजको साथ जवाफ दिन्छ र मलाई मेरो खाता फोन नम्बर प्रविष्ट गर्न अनुरोध गर्दछ। म गर्छु। यसले मलाई मँ के गर्न चाहन्छ भनेर सोध्छ, म ध्यान दिएर "यू-पद" सोच्नुहोस् "यू-पद" सोच्नको लागि एक राम्रो राम्रो ध्वनि हो। जाईन ... "मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले तपाईंको अनुरोध बुझिन।" अब म अलि निराश भइरहेको छु। "U- पदमा अपग्रेड गर्नुहोस्" ... त्यसले काम गर्दछ।
प्रणालीले मलाई भन्दछ कि म अपग्रेड गर्न सक्दिन, म केही प्रकारको ब्यालेन्स ब्यालेन्सको णी छु। त्यसो भए, म फोनमा क्रेडिट कार्डबाट मेरो सबै नम्बरहरू टाइप गरेर भुक्तान गर्छु। जिज्ञासु किन तपाईले मलाई यो वेब पेजमा बताउनु भएन जहाँ मैले लग इन र सेवा अनुरोध गरें।
जे भए पनि, म एक प्रतिनिधि, शानाका साथ जडित छु, र उनी उत्कृष्ट छन्। हामी कोल्ट्सले यस हप्तामा संतहरुलाई कुट्ने बारेमा थोरै कुरा गरेका छौं। उनले मलाई उनका पति भालु फ्यान हुन् भन्छिन। म सोध्छु, "के तिनीहरू अझै एनएफएलमा छन्?"। त्यो कि बाहिर एक चुलक मिल्यो। उनी मलाई भन्छिन उनको प्रणाली भन्छ कि यो पनि उपलब्ध छैन। म उसलाई भन्छु कि मेरो छिमेकीसँग थियो र उनी तिनीहरूको ठेगाना सोध्छन्। म अपार्टमेन्टबाट बाहिर भाग्नु पर्छ, सिढीबाट माथि जानुपर्दछ, र नम्बर प्राप्त गर्नुपर्दछ। म तल दगुर्दै तल भन्छु र उसलाई # १1324२। बताउँछु।
उनी जारी राख्छिन् र सोचिन् उनले प्रगति गर्दैछिन्। म धेरै उत्साहित छु। त्यसपछि कल ड्रप हुन्छ।
कसैले पछाडि बोलाउँदैन ... मेरो अनुमानमा प्रणालीले मेरो नम्बर ट्र्याक गरेको छैन र मसँग अहिले शनाहको पकड प्राप्त गर्ने माध्यम छैन तर प्रयास जारी राख्न। मैले दोस्रो पटक अपरेटरलाई डायल गर्ने प्रयास गरें तर अब त्यहाँ फेरि पर्खियो।
त्यसोभए ... म फेरि वेबसाइट भ्रमण गर्छु र ईमेल लेख्ने निर्णय गर्दछु। म पृष्ठको तल हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् र उपलब्ध रहेको फिल्डमा "U-Verse अपग्रेड गर्नुहोस्" टाइप गर्नुहोस्। म सबमिट क्लिक गर्दछु र पृष्ठ एक दुई ईमेल विकल्पहरू तल पुन: लोड गर्दछ। म पहिलो इ-मेल विकल्प क्लिक गर्दछु ... र ईमेल ठेगाना वा फारमको सट्टामा, म लिंकको साथ यू-वर्थ वेब साइटमा प्रस्तुत गर्दछु। त्यो साइट हो जुन म पहिले देखि नै थियो।
यसले मलाई जिज्ञासु बनाउँछ यदि तपाईंले आफ्नो साइटको साथ प्रयोगकर्ता-परीक्षण गर्नुभएको छ भने तपाईंको ग्राहकहरूको लागि तपाईंको अनलाइन सेवाहरूको प्रयोग गर्न कत्ति सजिलो वा गाह्रो हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन। म आश्चर्यचकित गर्दछु कि कति सयौं वा हजारौं अन्य ग्राहकहरू अधिक तिर्न र तपाईंको संस्थामा बढी मूल्यवान ग्राहकहरू हुन तयार छन् - तर सक्दिन।
त्यहाँ तपाईंसँग यो एटी एन्ड टी छ। म एक (पहिले) खुसी ग्राहक हो जो आफ्नो खाता अपग्रेड गर्न चाहन्छ। मैले मेरो बिल भुक्तान गरें, मसँग पैसा छ, र तपाईं मार्केटिंग गर्दै हुनुहुन्छ केही वर्षको लागि। तपाइँ साँच्चिकै मलाई अपग्रेड गर्न चाहानुहुन्छ, हैन? यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको वेब साइट अप्टिमाइज गरिएको छैन, तपाइँको अनलाइन च्याट राखिएको छैन, तपाइँको प्रणाली सही छैन, र तपाइँको फोन प्रणाली (विडंबना) मेरो कल ड्रप हुन सक्छ।
म तयार छु जब तिमी हुन्छौ।
स्पष्ट छ, त्यो आज छैन।
टैग: छुट्टी किनमेलhtaccess redirectमल्टिभेरिएट परीक्षणप्राकृतिक भाषा प्रशोधनस्ट्रिप फोल्डरVouchfor!WordPress
राम्रो व्याकरणको महत्व र ब्लगि inमा विराम चिह्न
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::6। बिहान
म यू-पद संग समान अनुभव थियो। यो अद्भुत छ। म यो धेरै नराम्रो चाहान्छु। मैले यसका बारे ईमेलहरू र टेलिमार्केटिंग कलहरू पनि प्राप्त गरें। हाम्रो क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध छैन। सबै मा, म आफ्नो ग्राहकहरु को सेवा मा यति नराम्रो कम्पनी कहिल्यै देखेको छैन।
अप्रिल 30, 2011 मा 6: 27 PM
त्यो पक्कै पनि कुनै समस्या जस्तो सुनिन्छ। के तपाईंले कहिल्यै आफूले खोजिरहनु भएको अपग्रेड प्राप्त गर्न समाप्त गर्नुभयो? व्यक्तिगत रूपमा, म बरु मेरो DISH नेटवर्क सेवाको साथ टाँस्नेछु। म एक लामो समय को लागी ग्राहक बनेको छु र हालसालै म एक कर्मचारी पनि भएको छु। DISH अझै पनी HD को जीवन को लागी नि: शुल्क महान सम्झौताको साथ उद्योग मा अरू कसैको भन्दा बढि HD च्यानलहरु छन्। प्लस त्यहाँ सोच्न को लागी अन्य कुराहरु पनि छन्, उदाहरण को लागी विश्वसनीयता को लागी। जब तपाईं एकल स्रोतबाट तपाईंको सबै मनोरन्जन / सञ्चार सेवाहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, यदि एकमा आउटेज छ भने, तिनीहरू सबै गर्छन्। कम्तिमा मेरो सेवाहरु मध्ये एक हिचकीको अनुभव म अझै पनी अन्यहरु लाई मज्जा लिन सक्छ।